I brezila - ny vavahadin-tserasera Breziliana. News, forum, ny kolontsaina, ny fifindra-monina, raharaham-barotra, ny jeografia
I brezila — ny vavahadin-tserasera Breziliana. News, forum, ny kolontsaina, ny fifindra-monina, raharaham-barotra, ny jeografia
Raha niresaka momba ny kolontsaina ao Brezila, dia afaka manondro ny sasany ny tena fisehoan. Misy ny zavatra izay efa manerana izao rehetra izao ny feo sy ny laza.
Ny olona iray dia mora ny milaza fa ny Samba dia ny hita vatana ny tena Breziliana ny fomban-drazana. Tsy misy fetibe dia tsy tanteraka raha tsy misy ny gadona ny Samba. Fa mety ho tsotra ny mieritreritra izany, satria eto miroborobo ary dia manokana ny Breziliana tranga capoeira, syncretic kolontsaina mainty mponina, Candomble sy umbanda, ny olona fetibe fombam-pivavahana, tena tsy toy ny fizahan-tany fetibe tamin’ny sambodrome ao Rio de Janeiro. Ny kolontsaina ao Brezila — izany dia matetika ny tsy ara-drariny kely tsy fantatra teo anivon ny mpiray tanindrazana Breziliana mpanoratra. Iray amin’ireo lehibe indrindra Breziliana, ny mpanoratra izay efa nampanan-karena ny kolontsaina ao Brezila dia Joaquim Machado de assis no nasainy hovakiana farany. Afa-tsy noho ny mponin ny firaisana sovietika teo aloha, mazava ho azy, dia ny be-ny asa malaza ny Jorge Amado, avela any ny fotoana tao amin’ny Firaisana Sovietika noho ny akaiky amin’ny Kaominista fomba fijeriny. Ny vanim-potoana Paulo Coello, na dia eo aza ny fifanarahan’ny ny fomba fijery ny hazavana toy ny mpanoratra malaza, lasa tia teo anivon ‘ny an-tapitrisany ny mponin’ ny firaisana sovietika teo aloha. Aza hadinoina momba ny fampiharana adala amin’ny firenena tamin’izany fotoana izany, ny voalohany ny tantara mitohy amin’ny FAHITALAVITRA Breziliana, izay lasa legend ‘ny faran’ ny taonjato farany. Hafa ny fanehoana ny kolontsaina Breziliana dia, mazava ho azy, ny baolina kitra. Ho an’ny ankamaroan’ny Breziliana, ny baolina kitra no tsy lalao fotsiny, ity no tena fombam-pivavahana. Na dia eo aza ny sasany ny disadisa ara-politika ny hetsi-panoherana manohitra ny Fiadiana ny Amboara eran-taona, ny baolina kitra sy ny sisa tavela amin ‘ny avonavon’ ny Breziliana ny olona. Ny ekipa Breziliana nahazo ny Amboara eran-tany indrindra ny isan’ny in — dimy. Breziliana ny tenany antso Pentacampeones. Anarana toy ny angano ny baolina kitra pelé sy ny tanora ny talentany toy Neymar lasa iraisam-pirenena hits.
Mahazatra dia mandrakizay
Fa mozika Breziliana dia tsy voasakantsakan’ny. Inona ny hira malaza indrindra any Brezila amin’izao fotoana izao. Amin’izao fotoana izao, ny toerana voalohany — Brezila, firenena iray izay mamirapiratra, ny hatsarany, ny maro kolontsaina ny tontolo iainana.
Te-hahafantatra bebe kokoa
Hanatevin-daharana ny Breziliana vavahadin-tserasera momba ny Brezila. Ny fangatahana sy ny fiaraha-miasa tolo-kevitra azo nalefa tany amin’ny toerana fitantanana amin’ny manaraka ny antsipiriany. Maka tahaka ny toerana ny fitaovana dia namela ny voasoratra alalana ny zon’ny mpamorona
← I brezila fivoriana
Ny tsara indrindra fantsona ho an'ny fianarana ny fiteny portiogey Avokoa ny Taranja an-Tserasera →